Myo Gyi, Author at YTV Channel
Author Archives: Myo Gyi
မိုနာကိုအသင်းဆီကို ပြောင်းပြီး အနာဂတ်တစ်ဖန် ပြန်လည်တောက်ပတော့မယ့် လီဗာပူးလ်တိုက်စစ် ကစားသမားလေး….
လီဗာပူးလ်အသင်းအနေနဲ့ ဆာလက်စ်တို့ မာနေး နှင့် ဖာမီနိုတို့ ထွက်ခွာဖို့ သတင်းတွေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မာနေးတစ် ယောက်အနေနဲ့ ဘိုင်ယန်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး ကျန်ကစားသမားနှစ်ဦိးကတော့ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် စဉ်းစားနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်…နည်းပြကြီးကလော့အနေနဲ့ကလည်း မာနေးနေရာမှာ ရူဘင်ဒိုင်းယက်ကို ထည့် သွင်းကစားရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ယခုအခါမှာတော့ ဂျပန်ကစားသမားလေး မီနာမီနိုကို မိုနာကိုအသင်းဆီ လက်လွှတ်လိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်…
မီနာမီနိုလေးဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး တိုက်စစ်ကိုအကောင်းဆုံး လိုက်ပါပံပိုးပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမားကောင်းလေးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်.. ယမန်နှစ်က FA ဖလားပွဲစဉ်များနှင့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်အချို့ကိုသာကန်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များတွင် နောက်မှရောက်လာတဲ့ ရူဘင်ဒိုင်းယက်လောက် နေရာမရခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…ယမန်နှစ်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းတွင် ၂၄ ပွဲကစားထားပြီး ၁၀ ဂိုးသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားကောင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်…
မိုနာကိုအသင်းဆီကို ၁၄ သန်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသင်းနဲ့လည်း လေးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်….ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တောက်ပသွားခဲ့တဲကြယ်ပွင့်လေး ပြင်သစ်မြေမှာလည်းထပ်မံတောက်ပတဲ့ ခြေစွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်သွားမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့် အားပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ……
လူမဝယ်လို့ ဆန္ဒပြတော့မယ့် ပရိသတ်များနှင့် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ အရှိန်ကောင်းလာတဲ့ မန်ယူ….
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် လူထုအားပေးမှုအများဆုံး အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နွေရာသီဈေးကွက်မှာ နောက်ကျလွန်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေကြောင့် မန်ချက်စတာမြို့ခံများက ဂလေဇာမိသားစု ကို ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်…..
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိမှာ ကွင်းလယ် ခံစစ်မှူး ဒီဂျောင်ကို ခေါ်ယူထားပြီဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ ရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ စပိန် သတင်းမီဒီယာ အချို့ရဲ့ ပြောပြချက်များအရသိရပါတယ်…ထို့အပြင် ခံစစ်နေရာကို အားဖြည့်ဖို့ ဖီရင်နု နောက်ခံလူ မာလာစီရာနှင့် အေဂျက်အသင်းမှ တင်ဘားကိုလက်လျော့လိုက်ရပြီးနောက် နောက်ထပ်ခံစစ်မှူး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာတီနက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့လည်းဆွေးနွေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်..........မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ အစမှာ လက်နှေးနေခဲ့ပေမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ရာသီ သိမ်းဖို့ နီးလာတာနှင့်အမျှ ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကစားသမား တော်တော် များများကို သဘောတူညီချက်တွေက တော်တော်လေး ကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် ….ညာတောင်ပံအတွက်ကိုလဲ အေဂျက် ကစားသမားလေးအန်တိုနီကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ လက်တစ်ကမ်း စာသာလိုတော့ပြီး လိုင်ယွန်အသင်းနှင့် သဘောတူညီချက် ရထားပြီဖြစ်တဲ့ ဖီရင်နုနောက်ခံလူကိုလည်း ခေါ်ယူသွားဖို့ နှာတစ်ဖျားသာဖို့ လိုတော့တာဖြစ်ပြီး မာလာစီယာအနေနဲ့လည်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ လိုင်ယွန်အသင်းကို အသိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်…..
အဆိုပါနောက်ခံလူနှစ်နေရာစာအတွက် အသင်းမှကစားသမားများကို ရောင်းချဖို့ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါစာရင်းမှာတော့ ဘိုင်လီနဲ့ ဝမ်ဘစ်ဆာကာတို့က ထိပ်ဆုံးကပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်…ကဲမန်ချက်စတာ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ နည်းပြတန်ဟက်လက် ထက်မှာ အသင်းမှကစားသမားတွေကိုလည်း စနစ်တကျကိုင်တွယ်နေပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာများကိုလည်း သေချာစီစစ်ပြီး ကစားသမား အပြောင်းအလဲများဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတာမို့ ယခုရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ပိုမိုနီးစပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး အားပေးလိုက် ကြရအောင်ဗျာ……
မထင်မှတ်ထားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားတို့ရဲ့ ထိပ်သီး (၁၀) ယောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးများ….
အားကစားသတင်းများကို နေ့စဉ်မပြတ်အားပေးနေကြသော အားကစားဝါသနာရှင် ပရိသတ်ကြီးများကို ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက် ပါတယ်…ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ YTV Website လေးကတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့ ပရီးမီယားလိဂ် သမိုင်းရဲ့ ရိုနယ်ဒိုတို့ ခေတ်အလွန် ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….
အဆင့် (၁၀)ကနေ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ….ပြောင်းရွှေ့ကြေး အများဆုံး အဆင့် (၁၀) မှာရပ်တည်နေတာကတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းကနေ လက်ရှိ ဂျူဗင်တပ်အသင်းမှာကစားနေတဲ့ အယ်ဗာတို မိုရာတာ ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်….သူ့ကို ရီးရဲလ်ကနေချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်လောက်ကခေါ်ယူခဲ့ပြီး အသင်းကစားကွက်နဲ့ အံမဝင်လို့ (၆၆)သန်းနှင့် ဝယ်ရကျိုးမနပ် ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်….အဆင့် (၉) နေရာမှာကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ နံပါတ်ခုနှစ်ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အိန်ဂျယ် ဒီမာရီယာပဲဖြစ်ပါတယ်...ဒီမာရီယာကို မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ (၇၅)သန်းနှင့် ဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာကစားပေးခဲ့တဲ့ ကစားသမားကောင်းတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်….အဆင့် (၈) နေရာမှာကတော့ အာဆင်နယ် ကစားသမား နီကိုလက်စ် ပီပီ က ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်….အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ အဆိုပါကစားသမားလေးကို သန်း (၈၀) ပေးကာ ခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အာဆင်နယ်အသင်းမှာတောင်ပံတစ်နေရာကို အကောင်းမွန်ဆုံး အသုံးတော်ခံနေတဲ့ ကစားသမား လေးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်…အဆင့် (၇) နေရာမှာတော့ ချယ်လ်ဆီးဂိုးသမားလေး ကီပါက နေရာယူထားပါတယ်…. ကီပါကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ သန်း(၈၀) ပေးပြီးခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပြီး ယခုအခါမှာတော့ အဆိုပါကစားသမားလေးဟာ ဂျူဗင်တပ်အသင်းမှာ လက်စွမ်းပြကာကွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်….အဆင့် (၆) အဆင့် (၅) အဆင့်(၄) နှင့် အဆင့်(၃) နေရာများမှာတော့ မန်ယူကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူကာကူနှင့် လက်ရှိ အသင်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဆန်ချို နဲ့ မက်ဂွိုင်းယားတို့ပါဝင်လာပြီး ပေါ့ဘာကတော့ အမြင့်ဆုံးကစားသမားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်….လူကာကူကို (၈၄.၇)သန်းနှင့်ဆန်ချိူကို (၈၅) သန်း မက်ဂွိုင်းယားကို (၈၇)သန်း ပေးခဲ့ရပြီး ပေါ့ဘာကိုတော့ (၁၀၅) သန်းအထိ ပေးကာခေါ်ယူခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…အဆင့်(၂) နေရာမှာကတော့ လက်ရှိအင်တာကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ဂန္ထဝင် ကစားသမားလေး လူကာကူ ကပြန်လည်ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်… ချယ်လ်ဆီး နည်းပြကြီး တူချယ်အနေနဲ့ ယမန်နှစ်ကမှ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး (၁၁၃) သန်း ပေးကာ ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကစားပုံ အံမဝင်ခဲ့တာကြောင့် အင်တာအသင်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…
နောက်ဆုံး နံပါတ် (၁) နေရာမှာ ရပ်တည်နေရတဲ့ ကစားသမားလေးကတော့ ယခုလက်ရှိ မီဒီယာတော်တော်များများမှာလည်း သတင်းမွှေးနေတဲ့ မန်စီးတီး ကစားသမား ဂျက်ဂရီးလစ်ရှ် ပဲဖြစ်ပါတယ်…..အဆိုပါကစားသမားလေးကို ယမန် နှစ်ကမှ နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ (၁၁၈) သန်း အထိပေးပြီး အက်စတွန်ဗီလာကနေ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ ကစားသမား လေးပဲဖြစ်ပါတယ်….ကဲ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ နောက်ပိုင်းမှာရော ဘယ်ကစားသမားတွေကို စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေနဲ့ ခေါ်ယူသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ နောက်လာမယ့်သတင်းလေးတွေမှာ ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်နော်…
ဘရာဇီးလ် တိုက်စစ်အတွဲကို မြင်တွေ့ရဖို့ နီးစပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်……
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ဂါဘရီရယ် ဂျီးဇုရဲ့ အပြောင်းအရွေ့စာချုပ်ကို မနက်ဖြန်မှာ အဆုံးသတ်ပြီး တရားဝင်ကြေငြာသွားမယ် လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ တယ်လီဂရပ်က ပြောကြားထားပါတယ်….ဂျေးဇုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်လောက်မှာကထဲက မန်ချက် စတာစီးတီးအသင်းမှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်…..
ငါးနှစ်တာ တစ်လျှောက်လုံး‌ မန်စီးတီးအသင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေနဲ့ အသုံးတော်ခံပြီးနောက် ဖိုဒန် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မန်စီးတီးရဲ့ အမေ့ခံသူရဲကောင်းအဖြစ် ပံပိုးပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း တိုက်စစ်ထပ် ညာဝန်းမှာသာ ကစားပေးရပြီး ပွဲထွက်ခွင့် အတော်များများလဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…ယခုအခါမှာတော့ ဂါဘရီရယ် ဂျေးဇုဟာ အာဆင်နယ်ကိုရောက်ရှိဖို့ လက်တစ်ကမ်းသာလိုတော့ပြီး ထိုအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပေါ် လာဖို့ကို နည်းပြကြီး အာတီတာကလည်း တော်တော်လေးကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်….
ကဲ…အားကစားချစ် ပရိသတ်တို့ရေ အာဆင်နယ်ရဲ့ ယခုရာသီ တိုက်စစ်မှာ ဘရာဇီး သား မာတီနယ်လီနှင့် ဂျေးဇုတို့ရဲ့ တွဲဖက် တိုက်စစ်လေး ဘယ်လိုမျိုး ပုံစံလေးနဲ့ အသက်ဝင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စွမ်းဆောင်သွားမလဲဆိုတာလေးကို စောင့်ကြည့်ကြရအောင် ဗျာ….
.ချယ်လ်ဆီးရဲ့ သွက်လက်တဲ့ လူဝယ်မှုနှင့် ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ ကစားသမားလေးများ…
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့များဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေ ကလည်း တော်တော်လေးမျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်….ပိုင်ရှင်အသစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာအပြောင်းအရွှေ့ ပိတ်ခါနီးကာလနီးစပ်လာတာနှင့်အမျှ တိုက်စစ် နှင့် ခံစစ်ကစားသမားများကိုခေါ်ယူဖို့ ဈေးကွက်ထဲမှာ တော်တော် လေးခြေလှမ်းသွက်စွာ လှုပ်ရှားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလစ် ဆိုတဲ့ ဂျူဗင်တပ်ခံစစ် ကစားသမားလေးကို အသင်းမှ တိုက်စစ်ကစားသမား တီမိုဝါနာနှင့် အလိုက်ပေးလဲလှယ်ရန် ပြင်ဆင် ထားပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှ တိုက်စစ်ကစားသမား ရိုင်ယယ် စတာလင်ခေါ်ယူရန် တော်တော် လေးနီးစပ်နေပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းမှ တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အော်စမန်နီ ဒမ်ဘီလီ ကိုလည်းခေါ်ယူရန် ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..ဒမ်ဘီလီဟာ ဘာကာနှင့် စာချုပ်သက်တမ်း ပြည့်တော့မှာဖြစ်သလို မန်စီးတီးကစားသမား စတာလင်ကလည်း မန်စီးတီးနှင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့ ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ ဘယ်သူက ယခုနှစ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးအလွတ်နဲ့ ရောက်လာမလည်းဆိုတာ မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်….ချယ်လ်ဆီး ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ နည်းပြကြီး သောမတ်တူချယ်လ်ကို နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် သန်း ၂၀၀ နီးပါးအထိ ထုတ်ပေးထားတာကြောင့် သောမတ်တူချယ်လ်အနေနဲ့ ကစားသမားဝယ်ယူပိုင်း အေခြေအနေမှာ ကျန်ရှိသော ပရီးမီယားလိဂ် ကလပ်များထပ် ကစားသမားဝယ်ယူခွင့်က အလားအလာ ပိုကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်....
ချယ်လ်ဆီးပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ အတောအတွင်းမှာပဲ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ရဲ့ legend ကြီး ရိုနယ်ဒို ကိုခေါ်ယူဖို့ အေးဂျင့် ဂျော့မန်ဒက်စ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လဲ သိရပါတယ်…..ချယ်လ်ဆီးဖန် ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရော ယခုနွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ ဘယ်ကစားသမား လေးတွေကို ရောက်စေချင်လဲဆိုတာကို မန့်ပေးခဲ့ပါဦးနော်……
ဂျူဗင်တပ်ရဲ့ခံစစ်မှုးကို အပြိုင်ခေါ်ယူကြမယ့် မန်ယူနှင့်ချယ်လ်ဆီး…….
အားကစားကို နေ့စဉ်မပြတ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ytv ရဲ့ အားကစားသတင်းများတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ website လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်….ဒီကနေ့ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ အေဂျက် ခံစစ်မှူးဟောင်းလေး လက်ရှိ ဂျူဗင်တပ်မှ ထွက်ခွာမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ ဒီလစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်…..ဒီလစ်အနေနဲ့ အေဂျက်မှာရှိစဉ်ကတည်းက မန်ယူမှခေါ်ယူရန် ပစ်မှတ်ထားခဲ့သော်လည်း ဂျူဗင်တပ်အသင်းထံ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး နဲ့ ရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…
ထိုအချိန်က မန်ယူအသင်းဆီကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ခံစစ်မှူးကတော့ လက်ရှိဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ မက်ဂွိုင်းယားပဲဖြစ်ပါတယ်..အခုအခါမှာတော့ နည်းပြကြီးတန်ဟက်လက်ထက်မှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားကောင်းလေးတွေကို ပြန်လည်စုစည်းနေလို့ ဒီလစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပြန်လည်ဦးတည်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်….ထိုကစားသမားလေးကို မန်ချက်စတာ ပြိုင်ဘက်အသင်းဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအနေ နဲ့ကလည်း ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်….ဒီလစ်အနေနဲ့ ဂျူဗင်တပ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပြီဖြစ် ပြီး သူ့အနာဂတ်မှာ ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ တန်ဟက်ရှိတဲ့ မန်ယူဆီကို ရောက်လာမလား….ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ တူချယ်ရဲ့လက်အောက်မှာဆက်လက်တောက်ပဖို့ ရွေးချယ်မလားဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
နည်းပြကြီးတန်ဟက်အနေနဲ့ကလည်း မန်ယူမှ ယခုနှစ်နွေရာသီ အတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဘက်ဂျက်ကို ပြန်ငဲ့မလားဆိုတာလေးနဲ့ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ပိုင်ရှင်အသစ်ကလည်း တူချယ်ကို သန်း ၂၀၀ ထိ သုံးဖို့ ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်ယူ ဘယ်အနာဂတ်မှာ ဒီလစ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေး တောက်ပသွားမလည်းဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ ခန့်မှန်းပေးသွားခဲ့ပါဦးနော်…
နောက်ရာသီမှာ စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကိုဦးဆောင်မည့် ခရာကျတဲ့ ကစားသမားကို ပြောပြလာတဲ့ အေးဂျင့်တစ်ဦး…
စပါးအသင်းဟာ လက်ရှိနွေရာသီမှာ ကစားသမားငါးဦးအထိ ခေါ်ယူထားပြီဖြစ်ပြီး အသင်းပြောင်းချင်နေတဲ့ ဆွန်ဟောင်မင်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါက စပါးအသင်းအတွက်အတောင့်အတင်းဆုံးလူအင်အားပိုင်ဆိုင်ဖို့များနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်…နောက်ရာသီမှာ စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို လူးကပ်စ်မိုရာ က ဦးဆောင်ပြီး ခရာကျတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ အဆိုပါကစားသမားရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူမှပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်….
သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်မှာတော့ လက်ရှိနည်းပြကြီး ကွန်တီအနေနဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမား များရောက်ရှိလာဖို့ လူးကပ်စ်မိုရာ အနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကြိုးစာပေးနေပြီး အဲဗာတန်အသင်းမှ တိုက်စစ်ကစားသမားလေး ရစ်ချက်လီဆန်ကို ခေါ်ယူဖို့ ညှိနှိုင်းနိုင်အောင်ကိုလည်း မိုရာက ကြံဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်…..ယခုဆိုရင် နည်းပြကြီးကွန်တီအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေအတွက်ကစားသမားများကို အသင့်ခေါ်ဆောင်ပေးထားပြီလို့လဲပြောကြားထားပါတယ်..
နောက်ရာသီမှာ မိုရာရဲ့အေးဂျင့်ပြောကြားထားသလိုပဲ နည်းပြကြီး ကွန်တီခေါ်ယူထားတဲ့ ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ထိပ်ဆုံးတစ်နေရာကို ခြိမ်းခြောက်သွားနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်း ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ ပြောချင်တာလေးတွေရှိရင် မန့်ပေးခဲ့ပါဦးနော်…
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကချိန်ရွယ်နေတဲ့ လိဒ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကို ခေါ်ယူတော့မယ့် မန်စီးတီး…….
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ယခုနှစ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ သွေးအေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ခေါ်ယူဖို့ချိန်ရွယ်နေတဲ့ကစား သမားတော်တော်များများကိုလည်း လက်လွှတ်ပေးနေရပြီပဲဖြစ်ပြီး ယခုအခါမှာလည်း လိဒ်အသင်းက ကွင်းလယ်ကစား ကယ်ဗင် ဖိလစ်ကိုပေါ့ဘာနေရာတွင်အစားထိုးခေါ်ယူဖို့ ကြံရွယ်နေပေမဲ့ နှောင့်နှေးနေတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကြောင့် မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးက ခေါ်ယူဖို့ ညှိနှိုင်းနေပြီး ၄၅ သန်း တန်ကြေးပေးဆောင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်….
အဆိုပါကွင်းလယ်ကစားသမားလေးဟာ ယမန်နှစ်က လိဒ် ကွင်းလယ်ခံစစ်နေရာတွင်အားဖြည့်ကစားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသက် ၂၆ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ အဆိုပါကစားသမားလေးဟာ လိဒ်အသင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကွင်းလယ် ရှေ့နောက်ကစား ကွက်ဖော်ဆောင်မှုမှာ ခရာကျခဲ့တဲ့ ကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်.လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဆိုပါကစားသမားလေးဟာ လိဒ်အသင်းအတွက် ၂၃၄ ပွဲကစားထားပြီး ၁၄ ဂိုးသွင်းယူပေးထားတဲ့ ကွင်းလယ်ခံစစ်ကစားသမားကောင်းလေးတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်….
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ မနှစ်ကလည်း ကွင်းလယ်ခံစစ်ပြဿနာကြောင့် အဆင့် ၆ နေရာမှာသာ ရပ်တည်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ယခုကစားသမားလေးကိုလက်လွှတ်ပေးလိုက်မလားဆိုတာကို နောက်သတင်းများမှာ စောင့်မျှော်ရှုစားပေးပါဦးနော်…
စပါးကနေ ထွက်ခွာတော့မယ့် ကစားသမားလေးများကို အပြိုင်ခေါ်ယူမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် လာလီဂါအသင်းများ….
တော့တင်ဟမ် စပါးအသင်းအနေနဲ့ လက်ရှိနွေဈေးကွက်မှာနည်းပြကြီး ကွန်တီအနေနဲ့ သူ့၏တပည့်ဟောင်း ပယ်ရီစစ်နှင့် ဂျူဗင်တပ်မှ ဘန်တမ်ကာ အခြားသောကစားသမားငါးဦးအထိ ခေါ်ယူထားပြီ ဖြစ်ပြီး အသင်းမှလည်း ထွက်ခွာတော့မယ့် ကစားသမား များလည်း ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်….
ထိုကစားသမားများမှာ ကွင်းလယ်က ဟယ်ရီဝင့်စ် နှင့် ကိုရီးယားတိုက်စစ်ကစားသမားလေး ဆွန်ဟောင်မင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…. စပါးအသင်းဟာ မန်ယူနှင့် အပြိုင်ခေါ်ယူနေရသည့် အဲရစ်ဆင်နှင့်လည်း သတင်းတွေထွက်နေပြီး လိဒ်အသင်းမှ ရာဖင်ဟာကိုလည်း ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ သိရပြီး လက်ရှိအသင်းမှထွက်ခွာမယ့် ကစားသမားနှစ်ဦးကို ယခုဈေးကွက်မှာရောင်းထုတ် သွားမလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….ဟယ်ရီဝင့်စ်ကိုတော့ လက်စတာနှင့် အဲဗာတန်တို့ ကခေါ်ယူရန်ကမ်းလှမ်းထားပြီး ယမန်နှစ်က ရွှေဖိနပ်ဆုနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ တောင်ကိုရီးယားသားလေး ဆွန်ဟောင်မင် ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို စိတ်နာကာ လာလီဂါ အသင်းဖြစ်တဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းဆီကိုပြောင်းရွှေ့ကစားတော့မယ်လို့ သတင်းများက ဖော်ပြထားကြပါတယ်…တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးအသင်းမှာ နှစ်ဦးစလုံးကတော့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်ဝတဲ့ကစားသမားလေးတွေဖြစ်ပြီး အသင်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ နောက်လာမယ့် သတင်းများမှာ ထပ်မံဖော်ပြပေးသွားပါမယ်နော်….
အားကစားချစ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကရော အဆိုပါကစားသမားလေးတွေကို တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါးမှာပဲ မြင်တွေ့စေချင်လား….. အခြားအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားစေချင်လား…..ဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်….